ऋणले कहिलै पिछा छोड्दैन् ? यी उपायबाट पाउनुहुनेछ छुटकारा – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/ऋणले कहिलै पिछा छोड्दैन् ? यी उपायबाट पाउनुहुनेछ छुटकारा
कुण्डली र ऋणसँग सम्बन्धीत योग ज्योतिषका अनुसार कुण्डलीमा षष्ठम, अष्टम र द्वादश भाव ऋणसँग सम्बन्धीत हुन्छन्। त्यसलाई मंगल ग्रहको कारक मानिन्छ।मंगह कमजोर हुँदा वा पापग्रहसँग सम्बन्धीत हुने हुँदा अष्ठम, द्वादश, षष्ठम भावमा अशुव हुने हुँदा व्यक्ति ऋणी बन्ने गर्दछ।
अन्य औलाहरुको तुलनामा माँझी औला किन लामो हुन्छ ? यस्तो छ अनौठो कारण